भरतपुर ताजा अपडेट : १,०१,९४५ मतगणना सकियो, कसको कति मत पुग्यो ? – Annapurna Post News
May 23, 2022 sujaLeaveaComment on भरतपुर ताजा अपडेट : १,०१,९४५ मतगणना सकियो, कसको कति मत पुग्यो ?
मोरङको सुन्दरहरैचा नगरपालिकामा एमाले विजयी-मोरङको सुन्दर हरैचा नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखमा एमालेका उम्मेदवार विजयी भएका छन् । मेयरमा केदारप्रसाद गुरागाईंले कांग्रेसका शिवप्रसाद ढकाललाई ७ सय २७ मतले हराउँदै विजयी भए । ढकाल निवर्तमान मेयर हुन् । गुरागाईंले २१ हजार ४ सय ५ मत ल्याउँदा ढकालले २० हजार ६ सय ७८ मत ल्याए ।
कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिकामा कांग्रेस विजयी-कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिकाको मेयर, उपमेयरमा कांग्रेस विजयी भएको छ । मेयरमा तोयप्रसाद शर्मा र उपमेयरमा भुलियाकमारी राना विजयी भएका हुन् । शर्माले १० हजार ६ मत प्राप्त गरे भने उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी एमालेका पदम पुजाराले ४ हजार ६ सय ७४ मत प्राप्त गरे । एकीकृत समाजवादीका जीवनराज थापाले ३ हजार ७ सय ३४ मत प्राप्त गरे ।